Fiainana antoko: namboly hazo tany Toamasina ny Arema | NewsMada
Nanatanteraka fambolen-kazo fihinamboa “letchis” sy “corossol” miisa arivo ao amin’ny fokontany Tananambo, Fanandrana – Toamasina II, ny antoko Arema ny faran’ny herinandro teo. Tany efa novidian’ny mpanorina mivady io nambolena hazo voalaza io ny taona 1963.
Nampahafantarana koa ireo mpikamban’ny “Comité directeur national –CDN”, voafidy nandritra ny kongresy natao teny Ilafy ny marsa 2020, izany. Nahatonga solontena ireo faritany enina sy ireo faritra 22.
Noferana ho 200 ihany ny isan’ireo nasaina noho ny fepetra ara-pahasalamana. Narahin’ny fiaraha-misakafo tamin’ny alalan’ny kolontsaina betsimisaraka “Tsaboraha” izany nofonkena mitam-pihavanana izany. Nitohy tamin’ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanatsarana ny endri-piaraha-miasa eo amin’ny samy mpikambana anivon’ny antoko Arema izany.